ကောင်းကင်ကို: ဘုန်းကြီးနဲ့ နိုင်ငံရေး
Posted by Kaung Kin Ko at 9:48 AM
ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ။ ဘာသာတရားကို ခုတုံးလုပ်၍ နိုင်ငံရေးလုပ်ခြင်းကိုသာ တားမြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဥပမာ - သံဃာ့ မဟာနာယကကြီးများကို အမိန့်ထုတ်စေခြင်းမျိုးပါ ။
I totally support your thought. Ifamonk want to do politics, he must accept the both pros and cons of being politician. All people must treat him equally asanormal politician even though he isamonk and don't lets him to take advantage on his being of monk.
တစ်လျှောက်လုံး ဖတ်လာတာအကောင်း အောက်ဆုံးပိတ်မှ လျှော်သွားတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ social structure မှာ သံယာဆိုတာ အရမ်းထူးဆန်းပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိလို့ပါ။ Social structure မှာ သံယာနဲ့ ပြည်သူက အပြိုင်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ social standard နဲ့ ပြည်သူရဲ့ social standard မတူပါ။ ဝိနည်းတွေ ဘာတွေနဲ့လည်း ကိုင်ပေါက်လို့ရပါတယ်။ ဒါက secular အမြင်ဖြစ်ပြီး ရှင်းပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေဟာ လူ့အရေးမှာ ဝင်ရောက်ပါဝင်ခွင့် လုံးဝမရှိပါ။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ သံယာဟာ သီးသန့်နေတာမဟုတ်ပဲ နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တွေတာ အများကြီးပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စ၊ အိမ်တက်ကိစ္စ၊ နောက်ဆုံး ပညာရေးမှာပါ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ကဏ္ဍက မသေးပါ။ နိုင်ငံရေးကလည်း အဲဒီအထဲမှာ ပါနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းကင်ကို ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ထောက်ခံထားပါတယ်။ "နိုင်ငံရေးလုပ်ရင် နိုင်ငံရေးသမားလိုပဲ ဆက်ဆံပါ" လို့ပါပြောထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ဆိုတာက ကျယ်ပြန့်တဲ့ အတွက် အဲဒီ့အောက်မှာ အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံ ပါဝင်နေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အရေးတွေ၊ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေလည်း ပါဝင်နေတာမို့ အဲဒီလို ကိစ္စရပ်တွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေလည်း ပါဝင်ခွင့် ရသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမား၊ လူမှုရေးသမားဆိုတာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အခွင့်အရေးပါ။ လောကီကို စွန့်လွှတ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားအားထုတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ တာဝန်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီကိစ္စတွေကို တာဝန်ယူမယ်ဆိုရင် အခြား လောကီကိစ္စတွေကိုပါ တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ မဲပေးရမယ်၊ အခွန်ပေးရမယ်၊ ယုတ်စွအဆုံး draft ဆွဲရင် စစ်တိုက်ရပါမယ်။ ပြည်သူလိုနေရင် ပြည်သူ့တာဝန်ယူရပါမယ်။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး မလုပ်ချင်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာ သဘာဝမကျပါ။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူ့တာဝန်နဲ့ အတူလာပါတယ်။ (ဒီစာကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာတွေ ထွက်လာသေးတယ်။ Social contract အကြောင်းနောက်မှ ဆက်ပြောချင်သေးတယ်) ဘုန်းကြီးတွေ လောကီကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာ သံယာဟာ ပြည်သူနဲ့ parallel မဟုတ်တော့ပဲ ရောထွေးသွားပါတယ်။ သံယာဆိုတာ civil society တစ်ခုလိုမျိုး အလုပ်လုပ်သွားပါမယ်။
"ဘုန်းကြီးတွေလည်း နိုင်ငံသားတွေပဲမို့ မဲပေးခွင့်ရသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီရိလင်္ကာလို ဘုန်းကြီးတွေ အာဏာယူမယ့်အထိ၊ လွှတ်တော်ထဲ ဝင်မယ့် အဆင့်အထိ ဆိုရင်တော့ စစ်တပ်လိုပဲ ဘုန်းကြီးတွေလည်း ပါတီထောင်ခွင့် မရှိသင့်ပါ။ လွှတ်တော်ထဲဝင်ခွင့် မရသင့်ပါ။ အဲဒီ့လောက်အထိ လုပ်ချင်ရင်တာ့ ပြတ်ပြတ်သားသား လူထွက်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။'
မဲပေးခွင့်ရှိရင် ဘာကြောင့် ပါတီထောင်ခွင့်မရှိတာပါလည်း။ ဒါကို slippery slope လိုမျိုး ငြင်းလို့ရပါတယ်။ ကောင်းကင်ကို ပြောတာက ရှေ့တစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရှိသင့်ပါတယ်။
အဓိကပြောချင်တာ ကျန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်က သံယာနဲ့ ပြည်သူ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရောထွေးနေတာ သဘာဝမကြပါ။ အပေါ်မှာပြောသလို slippery slope ဖြစ်နေပြီး သံယာဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ပါ။ ဒါကြောင့် secular အမြင်ကသာ ရှေ့နောက်ညီတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မဲပေးပြီး ပါတီထောင်ခွင့် မရှိတာကဒီလိုဗျ။ မဲပေးခွင့် ရှိတိုင်း ပါတီထောင်ခွင့် ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ စစ်သားတွေဆိုရင် မဲပေးလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါတီထောင်လို့မရဘူး။ လွှတ်တော်ထဲလည်း ဝင်လို့ မရသင့်ဘူး။ အဲဒါက နိုင်ငံတကာစံချိန်ပေါ့။ ဘုန်းကြီးကိုလည်း စစ်သားလို သဘောထားပြိး စဉ်းစားကြည့်တာ။ ပါလို့ ပါတီမထောင်သင့်သလဲ ဆိုတာက အုပ်ချုပ်ရေးမှာပါလာလျှင် ဘာသာရေးတွေကြားမှာ ဘက်လိုက်တာ ဖြစ်လာမယ်။ တရားစီရင်ရေးတို့ တရားဥပဒေပြဌာန်းရေးတို့မှာ ဘုန်းကြီးတွေ ပါလာရင် အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေလို ဘာသာရေးနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ပါ။ ပထမ ကွန်မန့်က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျန်တာလေး ဆက်ရေးပါဦး။
ဒါကတော့ သိန်းမြင့်ဝင်းဆိုတဲ့လူ Facebook မှာ ရေးတဲ့ဟာဗျ။ သူပြောတဲ့ထဲမှာက ဘုန်းကြီးတွေ ဆန္ဒပြခွင့်မရှီဘူးဆိုတာက secular သဘောအရဆို မှန်သလိုရှိတယ်လို့ ပြောပြီး သူဆက်ဆွေးနွေးထားတယ်။ သူပြောတာကို ကျနော် လက်ခံတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အမြင်မျိုးစုံ သိရအောင်ရယ်၊ သူ့အမြင်ပေါ် ထပ်ဆင့်ပြီး နောက်ထပ် အမြင်တွေ သိချင်တာရယ်ကြောင့်) ကျနော်လည်း အဲဒါကို ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့် စဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ။
(Thein Myint Win
December3at 10:04am ·
ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြကြတာ မှားတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ Secular သဘောအရကြည့်ကြတာပေါ့။ ယေဘုယျသဘောတော့ မှန်သလိုရှိပါတယ်။ ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေ ထွက်လာတုန်းကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတွေကို ကန့်သတ်ထားတာ တွေ့တယ်။
နည်းနည်းထပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါလား။ တကယ်က ဥပဒေရှုထောင့်က ကြည့်ရင် ရဟန်းတစ်ပါး (အခြား ဘာသာမှာဆို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်) ကို လူတစ်ဦးလို့ပဲ မြင်ရမယ်။ လူတွေခံစားခွင့်ရှိတဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လူတစ်ဦးပဲ။ အဲဒီလူတွေရဲ့ ဘာသာရေး ဝိသေသကြောင့် ဥပဒေအရ ကန့်သတ်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုရင်လည်း ဘာသာမခွဲခြားပဲ ဘာသာအားလုံးကို တပြေးညီကန့်သတ် ပြဌာန်း သင့်တယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အဲဒီ ဥပဒေဟာ ဘာသာရေးအရ မျက်နှာလိုက်တာပဲ။
ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးခွဲခြားကျင့်သုံးတယ် ဆိုတာ ဒီဥပဒေတစ်ခုတည်းကြည့်ရင်ကို မမှန်ဘူး။ ဥပဒေအရ အရေးယူစရာရှိရင်လည်း ရွှေဖော့လုံးနဲ့ ရိုက်စရာမလိုပါဘူး။ လူတွေနဲ့ အတူတူပေါ့။ ရဲက တောင်းပန်တယ်ဆိုပြီး လုပ်တော့လည်း ဘုန်းကြီးတွေကိုပဲ တောင်းပန်တယ်။ လူတွေကို မတောင်းပန်ဘူး။ ဒါ ဘာသာရေးအရ မျက်နှာလိုက်တာပဲ။ ဒီလိုပဲ စည်းခြား ကင်းပြတ်သင့်တဲ့ နေရာတွေမှာ မကင်းတာတွေ အများကြီး။ အဲဒီလိုဘက်ပေါင်းစုံ မှားနေတဲ့အချိန်မှာ သံဃာတွေကိုချည်း အပြစ်ပြောတာ မတရားဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
တို့လည်းဝင်ပါမယ်နော်။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို မြတ်နိုးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို သာသနာအလုပ်ပဲ လုပ်စေချင်ပါတယ်။
မနေသာလို့ လုပ်တယ်ဆိုရင် သီတဂူဆရာတော်လို လူမှုရေး၊ ပရဟိတလုပ်တာ မျိုးတွေပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
တရားလွန်နေရင် ဟောပြော ရေးသားပြီး တတ်နိုင်သလောက် ဆုံးမပြုပြင်တာတွေ လုပ်တာကို လည်းအားပေးပါတယ်။
ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က သာသနာပြု ဖို့ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်ပါတာကိုတော့ ဘ၀င်မကျလှဘူး။ (၂၀၀ရ သံဃာ့အရေးအခင်းကို တော့မကန့်ကွက်ပါ။)
Monk should aware "Are they applicance tools for people or political group", they stand for people by reason of people provide the nourishment.
Buddha originally taught his disciples not to subdue the people for any reason (whether donate or not).
Sayadaw U Oatama passed away by sorrowful life with lack of popularity (but most quoted his flourish time in political propaganda).
I have loaded your site in Three completely different
browsers and I must say this website loadsalot quicker
My personal e-mail is: darcysprague@aol.com. I'll even sign up through your affiliate link if you would like. Thanks
Also visit my page :: nutcracker